केशु बिरही, (तेर्हथुम)
“भन बाबु !”
“हामी घर नफर्कने बाबा ! तपाईंंले त हामी यहाँ केही दिनका लागि मात्र आएका हौं । हामी चाँडै नै हाम्रै घर फर्कन्छौं भन्नुभएको होइन र ! खोइ त यतिका महिना भैसक्यो । घर फर्कने कुरै गर्नुहुन्न ।”
“हो बाबु, हामी यहाँ केही दिनका लागि मात्र आएका हौं । printing machine अब चाँडै नै हामी हाम्रै घर फर्कन्छौं । ल, अब बाबु सुत्छ । भोलि बिहानै उठेर हामी पनि मामल जानुपर्छ । मामलबाटै बजार पनि जाउँला । म बाबुलाई बजारमा धेरै समान किनिदिन्छु । ल, अब सुत है ।”
“बाबा, मलाई खेलौनाहरु पनि किनिदिनुहोस् है । म घर फर्कंदा धेरै खेलौनाहरु लिएर जानुछ । अनि, मेरा साथीहरूलाई पनि लगिदिनुछ ।”
“ठीक छ, किनिदिउँला । ल, बाबु अब सुत है ।”
सानो छोरो प्रश्नमाथि प्रश्न तेस्र्याइरह्यो । ऊ सुत्नै मानेन । तर ज्ञानबहादुर भने छोरालाई सुताउन चाहन्थ्यो । जसरी भए पनि उसले छोरालाई सुताउनु थियो । काम विशेषले सुबोधकी आमा माइतीघर गएकी थिई । फोन मार्फत नै ‘आमा साह्रै हुनुहुँदोरहेछ, आम्दा लैजानुपर्नेभयो । म आउन भ्याउँदिनहोला । बरु,
printing machine तपार्इं पनि भोलि बिहानै आम्दा आउनुहोला । छोरालाई खाना खुवाएर राम्ररी सुताउनुहोला है’ भनेकी हुनाले आज छोरो सुताउने पालो परेको थियो उसको ।
छोरो सुताउन प्रयत्नरत थियो ऊ । निरन्तर लागिरह्यो । उसलाई छोरो सुताउनु एउटा कडा परीक्षामा सामेल भएझैं लागिरहेको थियो । तर छोरो सुत्नै मानेन । निदाउनुको सट्टा ऊ झन् प्रश्नमाथि प्रश्न थुपारिरह्यो, इँटाको थाकमाथि अरु इँटाहरु थपेझैं ।
त्यही प्रश्न पुनः बुबासामु पस्कियो,– “भन्नुहोस् न बाबा ! हामी किन यति सानो घरमा बसेको ? हाम्रो त वहाँ कत्ति ठूलो घर थियो नि, होइन र ?”
ज्ञानबहादुरले छोरालाई सम्झाउँदै भन्यो, “हो बाबु, वहाँ हाम्रो ठूलो घर छँदै छ । त्यसैले अब हामी केही दिनमै आफ्नै घरमा जाइहाल्छौं ।”
“अब हामी चाँडै नै आफ्नै घर जाइहाल्छौं,” भन्दिए पछि सुबोधको मन त्यसै प्रफुल्ल भयो । केटाकेटी न हो । कुन चाहिँ केटाकेटीको मन आफ्नो घर फर्कने भने पछि खुशी न होला र ! ऊ त्यसै फुरुङ्ग भयो । मनभित्र खुशीका ज्वाराभाटाहरू विष्फोटन हुन थाले । बालसुलभ मन न हो । त्यही मनबाट printing machine अनेकन तर्कना–वितर्कनाहरू आउन थाले ।
“आहा ! अब चाँडै घर जान पाइने भइयो । घर गएपछि म आफ्नै घरको आँगनमा खेल्न पाउँछु । यहाँ त आँगन पनि कत्ति सानो छ । नुहाउने धारा पनि छैन । चर्पी पनि कति नराम्रो छ । वहाँ हाम्रो त्यति राम्रो धारा र चर्पी त्यत्तिकै छ । यहाँ भने आमा र दिदीलाई धारामा पानी पर्खंदै हैरान ।”
“अनि, खाना पनि कति नमिठो । यत्रायत्रा फब्लेटा परेका चामल हुँदारहेछन् । सब्जी पनि खान नपाइँदोरहेछ । सधैं दालसँग मात्र भात खानुपर्ने । उहाँ त सब्जी पनि कति धेरै पाइन्थ्यो ।” ऊ यस्तैयस्तै कुराहरू मनभरि खेलाइरह्यो ।
ऊ कहिले आफ्ना बालसखीहरू त कहिले खेतबारी र आफ्ना घरमा पालेका गाईबस्तुहरूलाई सम्झन थाल्यो ।
उसको घरमा एउटा सानो कुकुरको छाउरो थियो । ऊ त्यसलाई औधी माया गर्दथ्यो । आफै नुहाइदिन्थ्यो, आफै खाना खुवाउँथ्यो । र, कहीँकतै जाँदा पनि साथमै लिएर जान्थ्यो । यहाँ पनि उसले त्यही छाउरोलाई सम्झिरहन्छ ।
“बिचरो त्यो सानो पप्पी, के गर्दै होला? के खायो होला ? कसैले खाने कुरा दिए, दिएनन् ।” यस्तैयस्तै कुराहरु मनभरि खेलाइरहन्छ । उसले त्यो सानो पप्पीलाई आउने बेलामा ल्याउन कम्ति प्रयास गरेको थिएन । तर लिन सकेन ।
जति निदाउने प्रयास गरे पनि ऊ निदाउनै सकेन । अरु भन्दा पनि कहिले आफ्नो घर जान पाइएला र सानो पप्पीसँग खेल्न पाइएला भन्ने कुराकै चिन्ता छ उसलाई । कहिले घर गएर आफ्ना साथीभाइसँग भेटघाट होला, ठूलो फराकिलो आँगनमा रमाउन पाइएला भन्ने मात्रै धेय छ उसको ।advertising player
आँखा झिम्म हुन मात्र के आँटेका थिए, ऊ फेरी बोल्न सुरु गर्यो, –“अब कति दिन बाँकी छ बाबा, हामी घर फर्कन ?”
ज्ञानबहादुरलाई अब त छोरो निदायो कि, भन्ने लागिरहेको थियो । तर छोरो भने निदाउनै सकेको थिएन । ननिदाइकन पुनः प्रश्नमाथि प्रश्न तेस्र्याइरहेको थियो ।
यसरी छोराले प्रश्नमाथि प्रश्न तेस्र्याइरहँदा ऊ थकित भयो ।
उसलाई छोराको पछिल्लो प्रश्नले त्यत्तिकै मर्माहत पनि बनाएको थियो । अरु प्रश्नहरूका उत्तर सरल रुपमा दिँदै आएको ज्ञानबहादुरलाई सानो छोराको यो पछिल्लो प्रश्नले भने अनुत्तरित तुल्याइदियो । अब के भनेर छोरालाई सम्झाउने ?
छोराले सोधेको प्रश्नको उत्तर कसरी दिने भन्ने कुराले ऊ चिन्तित बन्यो । अझ भन्नुपर्दा उसलाई यस्तो लाग्यो कि, छोराको त्यो प्रश्नको उत्तर नै उसँग छैन ।
अर्थात् भएर पनि ऊ त्यसको उत्तर दिन सक्दैन । अनेकन बहाना बनाएर छोरालाई सुताउने उसको प्रयास असफल भैरहेको थियो । त्यसैले कताकता ऊ आफूलाई समस्याको भूमरीमा भासिएको अनुभव गर्न थाल्यो ।
आफ्नो माटो छाड्नु पर्दाका पीडा ताजै छन् । परिचय गुमाउनु पर्दाको पीडा उस्तै छ । त्यो खपिसक्नुको छैन । त्यो पीडा अलिकति पनि कम हुनसकेको छैन । आँखाका आँसु अलिकति पनि ओभाएका छैनन् । अझै पनि त्यही सम्झिएर रातदिन आँखा रसाइरहेका छन् । सम्झ्यो कि, आँखामा आँसु बररर् झरिहाल्छन् । ती आँसु कहिले सम्झना बनेर त कहिले आक्रोश र प्रतिशोध बनेर झरिरहन्छन् ।
उसलाई थाहा छ, –माटो आमा हुन् । आमाको माया भन्दा advertising player ठूलो कुरा यो संसारमा केही पनि छैन । यही माटोको लागि, आमाको माया–ममताका लागि विश्वमा कति ठूल्ठूला युद्ध–महायुद्धहरू भएका छन् । सयौंले ज्यान गुमाएका छन् । अरबौंको भौतिक सम्पत्ति खरानी भएको छ ।
केही वर्षअघि मात्र आफ्नै छिमेकी देश भारतमा माटोकै लागि भएको त्यति ठूलो गोर्खाल्याण्डको लडाईं उसको आँखाबाट ओझेलिन सकेकै छैन । अझैसम्म पनि त्यो आन्दोलन जारी नै छ । आफ्नो छुट्टै अस्तित्वको लागि, आफ्नो माटोको लागि, आफ्नो पहिचानका लागि कतिले ज्यान गुमाएका थिए । कति घरबार विहिन भएका थिए ।
ठीक त्यही अवस्था भएको थियो उनीहरूको पनि । घर–बारी, छर–छिमेक, गाई–बस्तु अनि भए भरको सर–सम्पत्ति चटक्कै छाडेर हिँड्नुपरेको थियो । मात्र लगाएका एकसरो कपडाका भरमा उनीहरूले घर छाडेका थिए । चुलामा भर्सिएको भात पनि भन्न पाएका थिएनन् । बारीमा भित्रिन आँटेको बाली पनि भन्न पाएका थिएनन् ।
अब आफ्नो जन्मस्थलोमा फर्किएर जान पाइने हो कि, होइन ? आफूले त्यति मायाले सुम्सुम्याएर बनाएको घरको भित्तो टाल्न पाइने हो कि, होइन ? अरु भन्दा पनि आफ्नो निधारमा लागेको अनागरिकको धब्बा हट्ने हो कि, होइन ?
आफ्नो गुमेको परिचय फर्किने हो कि, होइन ? उसका यी सबै सवालहरू निरुत्तरित–निरुत्तरित बन्दै गएका छन् । र, कहिलेसम्म बनिरहने हुन्, उसलाई पनि केही थाहा छैन ।
छोरालाई भूल्याउनलाई भए पनि, मनभित्रको पीडालाई मनमै दबाएर उसले ‘अब आउने दसैंमा घर जाने’ भनिदियो । दसैंमा घर जाने भनेपछि छोरो पनि फुरुङ्ग भयो ।
“आहा ! अब दसैंमा घर जाने । उहीँ गएर दसैं मनाउने । आहा ! अब कत्ति रमाइलो हुन्छ ।” उसको उमङ्गको सीमा यति माथि पुग्यो कि, ऊ ओछ्यानमै उठेर नाच्न थाल्यो । त्यही बालसुलभ मनमा खुशीको बाढी झन्झन् छचल्किन थाल्यो ।
“बाबा, त्यो घोर्लेखसी नबेचौं है । घर गएर मात्र काट्नुपर्छ है । वहाँ गएर काटियो भने मेरो सानो पप्पीले पनि खान पाउँछ । अनि, म मेरा साथीहरू फुर्वा र निङ्वालाई पनि बोलाउँछु । घर जानेबेलामा मलाई दुईवटा ढाकाटोपी पनि ल्याइदिनुहोस् है बाबा ! म उनीहरूलाई चिनो लगिदिन्छु ।
थाहा छ बाबा, परारसाल उनीहरूले पनि मलाई थिम्पुबाट आउँदा एउटा कति राम्रो झोला ल्याइदिएका थिए । त्यो झोला अझैसम्म पनि मैसँग छ । मैले साथमै लिएर आएको छु ।” ऊ बर्बराइरह्यो । छचल्किरहेको खुशीको बाढी यसरी छताछुल्ल भएर पोखिइरह्यो ।
छोरालाई सुताउनलाई भए पनि उसले ‘हुन्छ, हुन्छ’ भनिदियो । जसोतसो छोरो त निदायो । तर ज्ञानबहादुर भने निदाउनै सकेनँ । अरु भन्दा पनि उसलाई छोरासँग झूठ बोल्नुपरेकोमा पीडाबोध भैरहेको थियो ।
ऊ सोच्न थाल्यो । अब घर फर्कन पाइने हो कि, होइन ? छोरालाई आउने दशैमा घर जाने त भनियो । अनेकन कुराहरू मनभरी खेलाएरै रातका पूरै प्रहरहरू बिते ।
तर ज्ञानबहादुरका मानसपटलबाट ती सारा सम्झनाहरू ओझिलिन सकेका थिएनन् । आफ्नो जन्मभूमि, आफ्ना छरछिमेकलाई ऊ जति गरे पनि भूल्नै सक्दैनथ्यो । टाहारी परेको खेत–बारी, लटरम्म फल्ने सुन्तलाको बगान । कति दुःख गरेर त्यो बगान बनाएको थियो उसले । खाइनखाइ गरेर जोडेको सम्पत्ति त्यत्तिकै छोडेर हिँड्नुपरेको थियो ।
सहोदर दाजुभाइझैं ‘ज्यूँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी’ बनेर बसेका छरछिमेक छाड्नुपर्दाको पीडा उस्तै थियो । आफ्नो भाषा–संस्कृतिमाथिको आक्रमण झनै कहाली लाग्दो थियो । उनीहरूले आफ्नो भाषा बोल्न पाएनन् । पुर्खाले लगाएको दौरा–सुरुवाल लगाउन पाएनन् । ढाकाटोपी पहिरन पाएनन् । आफ्नो चाडबाड मान्न पाएनन् । कति दर्दनाक थिए ती क्षणहरू । यी सारा कुराहरू सम्झँदा मात्र पनि उसको मन छियाछिया पर्न थाल्यो ।
झन् त्यहाँका डुक्पाहरूले आफ्ना छोरीबुहारीमाथि गरेको दुव्र्यवहार र कुकृत्यहरू सम्झँदा मात्र पनि उसलाई ऐठन लागेर आउँछ । उनीहरूको व्यारेकमा आफ्ना छोरीचेलीलाई पठाउनुपर्ने उर्दी गरियो । नाइँ, पठाउन्न भन्नेले गोली हानेर मारिदिन्छौं भन्ने जवाफ पाए । ती सबै सम्झेर ल्याउँदा त कहिलेकाहीँ उसलाई त्यस ठाउँमा कहिल्यै पनि फर्किएर जान नपाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तिनीहरूको मुखै हेर्न नपरोस् जस्तो लाग्छ । तर ऊ त्यसो गर्न सक्दैन । आफ्नो जन्मभूमिको मायाले उसलाई त्यसो गर्न दिँदैन ।
‘जननी जन्मभूमिश्चः स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने श्लोक सम्झियो । त्यही श्लोक पुनः दोहोर्यायो । त्यही जन्मभूमिको मायाले गर्दा त्यस्तो सोच्न पनि सकेन । मनमा उर्लिरहेको प्रतिशोधको बाढीलाई मनमै दबाउन बाध्य भयो ।
ज्ञानबहादुरको परिवार बेलडाँगी शरणार्थी शिविरको सेक्टर बाह्रको छाप्रो नम्बर बीसमा बस्दै आएको छ । उसको सानो फुसले छापेको दुुई कोठे घर छ । घरको भित्ता साधारण बाँसका कर्ची तथा चित्राले बारेर बनाइएको छ । एउटा सानो भान्साकोठा पनि छ, जुन घरसँगै जोडिएको छ । त्यो बाँसकै कर्ची तथा चित्राले नै बनाइएको छ । भान्साकोठाको छानो पनि बाँसकै छ । झ्याल–ढोका पनि बाँसकै छन् । बाँसकै चित्राले सजाइएका छन् । त्यति मात्र होइन, टेबुल कुर्सी र फूलदानी पनि बाँसकै छन् ।
उसको घरमा स–साना दुईवटा कोठा छन्, जहाँ कठीनले मात्र तीनचार जना अटाउन सकिन्छ । एउटा कोठामा उसको सुत्ने खाट छ, अर्को कोठामा श्रीमती र छोरा छोरीको । सबै कोठा साँघुरा छन् । त्यत्तिकै अस्तव्यस्त पनि छन् । कोठाको साँघुरोपनले गर्दा अलिअलि भएका, गास खोट्याएर जोडेका सामानहरू पनि राख्ने ठाउँ छैन । यत्रतत्र छरिएका छन् । धन्न उसको त सानो परिवार भएकोले मात्र हो । सानै ठाउँमा भए पनि उनीहरू अटाएका छन् । उसको छिमेकमा त नौनौ जनाको परिवार छ । उनीहरू त्यस्तै सानो छाप्रोमा भेडाबाख्राझैं कोचिएर बसेका छन् । त्यहाँ सधंै झ्याउँकिरी कराएझैं भैरहन्छ ।
ज्ञानबहादुरले छोरालाई सुतायो र छाप्राको दैलो उघारेर त्यहीबाट बाहिर नियाल्न थाल्यो । एकपछि अर्को गरेर लहरै रुपमा बनाइएका स–साना, एकछत्तका छाप्राहरू छन् । खुट्टै अडिन नसक्नेगरी एकपछि अर्को गरी लहरै बनाइएका बाँसे झुप्राहरू छन् ।
ती उसको घरबाट प्रष्टै देखिन्छन् । एकैनासका पटुके आकारका आँगनहरू छन् । तिनीहरू पनि पातलिँदै गएका छन् । साँघुरिँदै गएका छन् ।
उसले तिनै छाप्रालाई आँखाले भ्याउञ्जेल सम्म नियाल्न भ्यायो । छाप्राको वीचमा साना र साँघुरा गल्लीहरू छन् । तिनीहरू पनि दिनानुदिन अतिक्रमित हुँदै गरेका छन् । यस्तै छ, उसको बस्तीको परिचय । यस्तै छ, उसको नयाँ परिचय । आफ्नो परिचय गुमाएर जबर्जस्ती थोपरिएको नयाँ परिचय हो योे उसको । नागरिकबाट अनागरिक बनाइएको परिचय हो यो उसको । देश भएर पनि देश नहुनेको परिचय हो यो उसको । ऊ यस्तै परिचय लिएर बाँच्न विवश भएको छ ।
यस्तो त उसले सानो हँुदा गोठहरूमा मात्र देखेको थियो । लेकमा यसरी नै लहरै गोठहरू बनाइएका हुन्थे । त्यहाँ गाई–भंैसीहरू यसरी लहरै रुपमा बाँधिएका हुन्थे ।
ऊ बारम्बार आफ्नो बुबासँग गोठमा गैरहन्थ्यो । तर उसले शिविरका छाप्राहरू ती गोठहरू भन्दा पनि अझ कमजोर भएको महसुस गरिरहेको छ । किनभने ती गोठहरूको त एउटा छुट्टै परिचय थियो । फलानाको गोठ भनिन्थ्यो । त्यहाँ कसैको स्वामित्व रहन्थ्यो । उसको अनुमतिविना कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनथे । उसले चाहेको बेलामा त्यसलाई बेचबिखन गर्न पनि पाउँथ्यो । कसैले तँ यो गोठ छाडेर जा भन्ने हिम्मतसम्म गर्न सक्दैनथे । तर यहाँ त न स्वामित्व छ, न अधिकार नै । न अपनत्व छ, न स्थायीत्व नै ।
जुनेली रात थियो । आकाशमा टहटह जुन लागिरहेको थियो । उसलाई अझ बाहिरै निस्कन मन लाग्यो । बाहिरै निस्कियो र टाढाटाढासम्म नियाल्न थाल्यो ।
जुनको उज्यालोेले टाढाटाढासम्मको दृश्य नियाल्न उसलाई कुनै कठिन परेन । छाप्राअघि उत्तर–दक्षिण भएर रतुवा खोला आफ्नै पारामा बगिरहेको छ । हावा सिरसिर चलिरहेको छ । यो रतुवा खोला अहिले उसलाई अहिले आफ्नै मानस नदी जस्तै लाग्न थाल्छ । यो खोला अहिले आफ्नै गाउँ नजिकै भएर बगिरहेको छ जस्तो लाग्छ । आफू त्यहीँ पुगेको आभास हुन्छ उसलाई । त्यही चिसो कलकल पानीमा पौडी खेलेको अनुभव हुन्छ उसलाई । हावाको एक झोक्का आएर त्यहीबेला उसलाई स्पर्स गरेर जान्छ । र, त्यही खोलामा गएर समाहित हुन्छ । त्यो हावाको झोक्काले आफूलाई चिनेझैं लाग्छ । आफ्नै गाउँबाट, आफ्नै लेकबेसीका झरनासँग मिसिएर बहेकोे जस्तो महसुस हुन्छ । उसको मन त्यसै फुरुङ्ग हुन्छ । ऊ क्षणभरलाई भए पनि रमाउँछ । तर त्यो सबै भ्रम मात्र हुन्छ । त्यो सबै मृगतृष्णा बनेर क्षणभरमै विलय हुन्छ । ऊ आफूलाई पराईभूमिमा पाउँछ । उसको मन त्यसै अमिलो भएर आउँछ । मनलाई काबुमा राख्न खोज्छ । तर ऊ असमर्थ रहन्छ ।
बाबुले दसंैमा घर जाने भनिदिएपछि यता सुबोध शिविरभित्रको सानो कोठामा झुण्ड्याइएको क्यालेण्डरमा नियाल्न थाल्यो । त्यति खेर श्रावणको महिना थियो । दसंै आउनलाई अब तीन महिना मात्र बाँकी छ भन्ने थाहा पाएपछि दिदीलाई भनेर उसले दसंैको मितिमा गोलो चिन्ह लगायो ।
आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि ऊ त्यही कुरा सुनाउन थाल्यो, “बुबाले भन्नुभएको, यसपालीको दसैंमा त हामी हाम्रो घर जाने रे । दसंै पनि उही गएर मनाउने अरे । मैले बुबालाई घोर्ले खसी पनि उहीँ गएर काटौं भनेको छु । बुबाले पनि हुन्छ भन्नुभएको छ ।”
अब दसैं आउन कति दिन बाँकी छ भनेर ऊ दिनहुँ जसो क्यालेण्डरमा आँखा पु¥याउँथ्यो । ऊ बिहानै उठ्थ्यो र क्यालेण्डरमा गोलो चिन्ह लगाउँथ्यो । त्यो काम नगरी ऊ अरु केही पनि गर्दैनथ्यो । चिया पनि खाँदैनथ्यो । बिहानै उठ्ने र क्यालेण्डरमा चिन्ह लगाउने त सुबोधको दैनिकी नै बनिसकेको थियो ।
दसंैमा घर जाने भनिदिएपछि उसको दिनचर्या नै बदलिएको थियो । बानीव्यवहारमा पनि ठूलै परिवर्तन आएको थियो । ऊ बिहानै उठ्थ्यो । उठेपछि हातमुख धोएर पढ्न बसिहाल्थ्यो । पहिले जस्तो दिदीसँग झगडा पनि गर्दैनथ्यो ।
आमासँग खाना मीठो भएन भनेर कलह पनि गर्दैनथ्यो । जस्तो दिए पनि चुपचाप मीठो मानेर खान्थ्यो । खाना खाने बित्तिकै होमवर्क गर्न बसिजान्थ्यो । ऊ होमवर्क नगरिकन सुत्न पनि मान्दैनथ्यो ।
घरमा मात्र होइन, उसको बानीव्यवहार विद्यालयमा पनि उत्तिकै परिवर्तन भएको थियो । कक्षामा पनि अनुशासित भएर बस्न थालेको थियो । गुरु–गुरुआमाहरू पनि आजभोलि सुबोधसँग औधी खुशी देखिन्थे । पढाइमा राम्रो प्रगति भएकोमा दङ्ग थिए ।
जतिजति दसैं नजिकिदै जान थाल्यो त्यति नै ज्ञानबहादुरको मनमा भने पीडा थपिँदै जान थाल्यो । शरीर गह्रौंै भएर आउनथाल्यो, एकमनको ढुङ्गो छातीमा राखेझैं ।
कहिलेकाहीँ त मनमा अनेकन नराम्रानराम्रा सोचहरू पनि पैदा हुने गर्दथे । छँदाखाँदाको सम्पत्ति लुटाएर कति दिनसम्म यस्तो भिखारीकोजस्तो जीवन व्यतीत गर्ने ? अरुको आशमा कति दिनसम्म बाँच्ने ? न कुनै व्यवसाय गरेरै खान पाइने ? अरुको सहारामा यसरी कति दिन जिउने ? थुइया, यो कस्तो जीवन !”
अरु भन्दा पनि उसलाई सधैं स–साना छोराछोरीको भविष्यको बारेमा चिन्ता लागेर आउन थाल्यो । ऊ सोच्न थाल्यो, “यसरी सधैंभरि सुकुम्बासी जीवन गुजार्ने हो भने भोलि यी साना केटाकेटीहरूले के गरी खालान् ? यिनीहरूको भविष्य के होला । यदि यसरी नै सधैं सुकुम्बासीकै जीवन बिताउँदाबिताउँदै केटाकेटीले आफ्नो भाषा–संस्कृति पनि कसरी नभूल्लान् र !”
समय बित्न कति नै बेर लाग्दो रहेछ र ! समय त थाहै नपाई बित्दोरहेछ ।
मानौं, समय एउटा वायुपंखी घोडा हो । यसले दिनहरूलाई हतारहतार आफूसँगै सयर गराइरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि, त्यो समयरुपी घोडाले जबर्जस्ती समयलाई अगाडि धकेलिरहेको छ ।
दिन बित्छ, रात बित्छ । हप्ता हुँदै महिना बित्छ । अनि, महिना हुंदै बर्ष र बर्ष हुंदै पूरै शताब्दी नै बित्दोरहेछ । यस क्रममा कैयौं जीवनहरू आउँछन् र विलय हुन्छन् । यो समयको नियम नै हो । यो नियमलाई कसैले पनि चुनौति दिन सक्दैन । र, आजसम्म दिन सकेका पनि छैनन् । यो कुरा ज्ञानबहादुरलाई पनि राम्ररी थाहा छ ।
यही क्रममा दिन–रात, हप्ता र महिना हुँदै ज्ञानबहादुरले छोरालाई घर जाने भनेर दिएको समय पनि आउन थाल्यो ।
हेर्दाहेर्दै दसंैले गाउँघरमा पाइला टेक्यो । दशैको रमझम चारैतिर देखिन थाल्यो । जमरा राख्न सुरु भयो ।
सबैले आ–आफ्नो गच्छे अनुसारको दसैंको किनमेल गरिसकेका छन् । ज्ञानबहादुरको छाप्रोमा पनि दसैंको किनमेल भैसकेको छ ।
आज फूलपातीको दिन । शिविर आसपासका केटाकेटीहरू नयाँनयाँ कपडामा सजिएका छन् । नयाँ कपडा लगाएर रमाइलो मनाइरहेका छन् । कोही चचाहुइया ! चचाहुइया !! भन्दै पिङ्गमा मच्चिरहेका छन् । कोही दसैंमा मामाघर जाने । मेरो त मामलीघर पनि धेरै छन् । यति पैसा हुन्छ । उति पैसा हुन्छ । म दसंैको पैसाले गुडिया किन्छु । बाबासंग भनेर साइकल किनिदिन भन्छु भनेर योजना बनाइरहेका छन् । कोही भने यसपालीको दसैंको पैसाले नयाँ फिलिम हेरिन्छ पनि भन्दै छन् । तर सुबोधलाई भने ती कुनै कुराको पनि चासो छैन । ऊ
कहीँकतै पनि सरिक भएको छैन । ऊ बिहानै उठेर आफ्ना सामानहरू जम्मा गर्नमै व्यस्त छ । उसलाई हतारो छ । सकिनसकी ऊ आफ्ना कपडाहरू एउटा झोलामा राख्छ । किताबहरू भने बाकसमा राखिदिन दिदी सुधालाई अह्राउछ ।
दसंै आइसक्दा पनि सुबोधको परिवारमा घर जाने सुरसार थिएन ।
त्यसैले ऊ दिक्क मान्दै बुबासामु आयो । र, भन्नथाल्यो, “बाबा दसैं त जान आँटिसक्यो, आज त फूलपाती पनि भैसक्यो, अब त घर जाने हैन ? खै त घर जाने तयारी गरेको ? आजै जानुपर्छ । नत्र हामीलाई घर पुगेर दसैं मनाउन गाह्रो पर्छ । घर पनि पूरै फोहोर नै फोहोर भएको होला । सरसफाई पनि गर्नुपर्यो । रङ पनि लगाउनुपर्यो । ल, आजै हिँड्नुपर्छ है । मैले त अघि नै मेरा सबै कपडाहरू पनि झोलामा राखिसकेको छु । किताबहरू पनि दिदीलाई बाकसमा राख्न भनेको छु । ल, तपार्इंहरू पनि आ–आफ्ना कपडाहरू झोलामा राख्नुहोस् ।”
सुबोधले शिविरभरिका साथीभाइहरूलाई पनि आज घर जाने भनेर अघि नै बिदा मागिसकेको थियो । त्यही कुरा बुबालाई पनि बताउँछ, “बाबा, मैले त साथीहरूसँग पनि अघि नै बिदा मागिसकेको छु । अनि तपाईंहरूले चाहिँ बिदा माग्नु पर्दैन त ? कपडा पनि लगाएको देख्दिनँ । छिटो गर्नुहोस् । नत्र भरे ढिला हुन्छ । बेलैमा पुगिएन भने भरे कहाँ बास बस्ने ?”
सुबोध बोलिरह्यो । तर अरु भने चुपचाप रहे । केही पनि नबोली उसको कुरा मात्र सुनिरहे । बुबाआमा दुवैजना मौन देखेर सुबोध नमीठो मान्दै भन्यो, “बाबा ! बोल्नुहोस् न, किन नबोल्नुभएको । छिटो जाऊँ न ।”
उसले त्यसो भनिरहँदा पनि कोही बोलेनन् । ऊ झनै छक्क पर्यो ।
आश्चर्यभावमा पुनः बर्बराउन थाल्यो, “भन्नुहोस् न बाबा, भन्नुहोस् न, दसैंमा घर जाने भनेको होइन, कि नजाने ?”
सुबोधको कलह झन्झन् बढ्न थाल्यो । त्यो देखेर सबै जना चिन्तित भए । सुबोध ढिप्पी गरिरह्यो, ‘भन्नुहोस् न बाबा, भन्नुहोस्’ भनेर ।
छोराले ज्यादै ढिप्पी गरेपछि भने ज्ञानबहादुरले सत्यता नओकली धरै पाएन ।
उसले साँचो कुरा बताउनै पर्ने भयो । हुन त यो कुरा उसले धेरैअघि बताउने प्रयास नगरेको पनि होइन । तर, सधैं असफल हुँदै आएको थियो । त्यसो त त्यो सत्यतालाई छिपाउनुमा उसको बाध्यता पनि थियो । छोराको कलिलो मस्तिष्कमा असर नपरोस् भनेर नै उसले त्यो सत्यलाई उद्घाटन गर्न नचाहेको थियो । छोराको अवस्था देखेर ज्ञानबहादुरका आँखा अघिदेखि नै रसाइरहेका थिए । अरुको पनि हालत उस्तै थियो ।
छोराले कलह गर्न छाडेकै थिएन । अब भने उसलाई रहस्य लुकाइरहन गाह्रो पर्यो । गाँठी कुरा नभनी उसले धरै पाएन । अन्त्यमा ज्ञानबहादुरले वास्तविकता बताउनु नै मुनासिव ठान्यो ।
आँखाभरि आँसु ढिलपिलढिलपिल पार्दै छोरालाई काखमा लियो र भन्न थाल्यो, –“बाबु, अहिले हामी चाहेर पनि हाम्रो घर जान सक्दैनौं । हाम्रो घरलाई आज अरु कसैले आफ्नो बनाइसकेका छन् । हाम्रो घर लुटिएको छ । हामी लुटिइएका छौं । हाम्रो सारा सम्पति लुटिएको छ । हाम्रो परिचय लुटिएको छ । हामी त्यही लुटिएको परिचय लिएर यहाँ बस्न विवश छौं । त्यसैले त हामी आज यहाँ यति सानो घरमा शरण लिएर बसिरहेका छौं । छोरा, हामी शरणार्थी हौं । शरणार्थी । त्यसैले चाहेर पनि हामी अहिले हाम्रो घर जान सक्दैनौं ।”
बाबुले यसो भनिरहँदा सुबोध अघि नै बेहोस भैसकेको थियो । ज्ञानबहादुरले हतारहतार भित्र गएर एकगिलास पानी ल्यायो र छोराको अनुहारमा छर्कन थाल्यो
। त्यति बेलासम्ममा शिविर वरिपरिका मानिसहरू भेला भैसकेका थिए । सुबोधकी दिदी सुधा पनि हस्याङ्फस्याङ् गर्दै बाहिर निस्की ।
“भाइ ! भाइ !! के भयो तिमीलाई ! उठ बाबु, उठ ।” ऊ पनि चिच्याउन थाली । तर सुबोध उठेन । ऊ अर्धचेत अवस्थामा दिदीको अनुहारमा मात्र हेरिरहेको थियो ।
सुधा भाइलाई सम्झाउँदै थिई,–“भाइ, किन चिन्ता लिन्छौ । अहिलेको दसैंमा घर जान नपाएर के भयो त । एक दिन त अवश्य पनि हामी हाम्रै घर गैहाल्छौ नि । अनि, त्यसपछि हामी सबै जना मिलेर आफ्नै घरमा दसैं मनाउँला । खसी काटौंला, हुन्न र !”
दिदीले त्यसो भनिरहँदा सुबोध केही बोल्न सकेको थिएन । ऊ मौन थियो ।
टाउको मात्र हल्लाइरहेको थियो ।